🥇 ▷ Disney + waxaa laga heli doonaa Android, Android TV iyo Chromecast qiimo qiima badan ✅
Disney + waxaa laga heli doonaa Android, Android TV iyo Chromecast qiimo qiima badan
Dhowr saacadood ka hor waxaan la kulannay faahfaahin cusub oo ku saabsan Disney + adeegga cusub ee qulqulka taas oo noo oggolaan doonta inaan ku raaxeysanno dhammaan waxyaabaha ku jira qalabka madaddaalada. Waxay umuuqataa bilawga bilowga inaysan kali ka aheyn Mareykanka, waxaan horeyba u ognahay dhamaan aaladaha ay adeeggu bilaabi doono.
Disney + wuxuu sii xoogaysanayaa: 6.99 euro wuxuuna la jaan qaadayaa ku dhawaad ​​dhammaan goobaha
Suuqa adeegyada qulqulka Waxaad ku nooshahay daqiiqad is ballaarin ah. In kasta oo Netflix u muuqato inuu sii ahaan doono hoggaamiye soo saarista waxyaabaha ku kooban dhijitaalka, waxay umuuqataa in sii wadida hogaankan ay sii adkaaneyso
Disney + isku-duubnida lafteeda sidii mid ka mid ah tartamayaasha ugu adag, kaliyana ma keeno dhammaan buugga ‘Disney’ iyo wax soo saarkooda, laakiin sidoo kale laga jaray buugyaraha sheegaya in Netflix lafteeda ay leedahay rukhsad ay ku baahiso baahinta.
Dhawaan waxaan helnay faahfaahin cusub oo ku saabsan adeegga Disney +, ugu dambeyntiina waan ognahay qiimaha ay ku yeelan doonto Yurub. Qiimahaan wuxuu markii hore ka bilowdaa 6.99 euro bishii, iyada oo ikhtiyaar loo helo si aan sanadka u helno 69,99 euro. Qaabka sanadlaha ah waxaan badbaadin lahayn laba bilood hadiyad.
Qiimaha dheeriga ah, waxaan ognahay liiska aaladaha bilowga ah ee aan ka haysan karno dhamaan waxyaabaha kujira baahida. Waxay ahayd wax iska cad in Android uu ku jiri doono liiska bilowga ah, laakiin marna kuma dhaawacmo in la ogaado xaqiijinta rasmiga ah. Waxaan sidoo kale haysannaa codsi loogu talagalay Android TV iyo la jaan-qaadista Chromecast, oo ah qiimo dheeri ah oo muhiim ah si loogu rakibo dalabka moobiilka.
Haddii aad shaki ka qabtid, kuwanu waxay noqon lahaayeen masalado aan markii hore ku raaxeysan karno Disney +:
Cudurka loo yaqaan ‘Chromecast’
Disney + waxaa laga heli karaa Nofeembar 12, 2019 Maraykanka, Kanada iyo Nederland. Waqtigaan ma ogin taariikhda imaatinka Spain, laakiin laga yaabee in iska diiwaangelinta VPN aysan jirin dhibaatooyin badan.